Nataon’ny baomban’i Etazonia tsy azo diavina fa azo jerena amin’ny alalan’ny tantelimby indray ny fijerena ity toerana manantantara ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2015 9:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Sary vaovao nalaina tamin'ny tantelimby [drone] manome fijery avy any an'habakabaka tsy fahita firy amin'ny Lohasahan'ny Siny feno misitery ao Laos avaratra.
Ny faritanin'i Xieng Khouang no itoeran'ny siny vato mihoatra ny 2000 ary inoana ho efa 2000 taona. Maro ireo mpampianatra mpikaroka fa natao ho vata itoeran'ny maty navelan'ny sivilizasiona tsy fantatra ireo siny ireo. Misongadina sady tsy manampaharoa io habaka arkeôlôjika io ao Azia Atsimo Atsinanana, saingy mbola tsy voatrandraka satria ilevenan'ireo baomba mahafaty maro tsy nipoaka nalatsaky ny Amerikana nandritra ny adin'i Vietnam.
Laos, mpifanolotra sisintany amin'i Vietnam, no firenena nodarohana baomba mavesatra indrindra teto ambonin'ny tany nandritra ny adin'i Vietnam. Tombanana ho eo amin'ny 2 tapitrisa eo ho eo ny baomba nalatsaka tao Laos tanelanelan'ny taona 1964 ka hatramin'ny 1973, saingy tsy nipoaka ny tokony ho 30 isanjaton'ireo. Mbola mandratra sy mamono ireo Laosiana tantsaha ihany hatramin'izao fotoana izao ireo baomba tsy nipoaka ireo.
Manazava ny maha zavadehibe ireo siny ireo sy ny tsy ahafahan'ny mpikaroka manao fanadihadiana lalina ao amin'io habaka arkeôlôjika io ny Bolongam-baovao The Southeast Asian Archaeology :
Ankehitriny, anefa, noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia, dia afa-mitondra antsika hijery avy eny an'habakabaka ny lohasaha lasa mampididoza loatra hoan'ny olona ny tantelimby [drone]. Manome antsika ny topimason'ny toerana arkeôlôjika feno ankamantatra ity lahatsary maharitra telo minitra. Asehon'ny lahatsary ihany koa ny lavaka nateraky ny baomba sy ireo hady iarovan-tena an'ady—navelan'ny adin'i Vietnam :
Antenaina fa hiteraka fanairana momba ireo siny ireo sy hitarika ho amin'ny ezaka fitehirizana io lahatsary io. Amin'ny maha-mpampianatra mpikaroka an'i Lia Genovese no nanamarihany, fa maro ny fanamby atrehina ho fiarovana ireo siny ireo: